यस्ता पुरुषले यौ’न स’म्प’र्क गरम भन्दा नाइ भन्दिनन् युवती – Khula kura
यस्ता पुरुषले यौ’न स’म्प’र्क गरम भन्दा नाइ भन्दिनन् युवती
उमेरमा मेरो विवाह भयो। केही आफ्ना रह’र र केही बा’ध्य’ताका बीच म बिहे लगत्तै जापान आउनु प-यो। हेर्दाहेर्दै कतिबेला साढे चार वर्ष बि’त्यो, पत्तै भएन।
त्यसमाथि त्यो उमेरमा ग’हि’रोसँग प्रेम गरेको व्यक्तिलाई छो’डेर आउनुपर्दा मेरो हा’ल’त पनि कम थिएन। तर यो हाम्रै भविष्यका लागि थियो। दुई जनाको मात्र होइन, पूरै परिवारकै भविष्यको स’वा’ल थियो।
भविष्य चिताएर नै सायद कयौँ अव’स्थामा मन अमिलो भए पनि विदेशमा बस्नुपर्ने बा’ध्य’ता रह्यो तर म विदेशमा रहेका बेला मेरो पति मेरो रहेनन्।
बिहेपछिको एक वर्ष हामीबीच अति राम्रो स’म्ब’न्ध थियो। उनीसँगको सहमतिमा नै म विद्यार्थी भिसामा जापान आएकी थिएँ। जापान आएको ६ महिना जति उनले मलाई ज्या’दै मि’स गर्थे, मैले पनि उनलाई छो’ड्नु प’रेकामा वि’स्मा’त ला’गेर आउँथ्यो। कहिलेकाहीँ त बरु सारा पढाइ छाडिदिऊँजस्तो लाग्थ्यो।
म जापान आइपुगेको छ महिनापछि नै मैले मेरा पति अर्की एक महिलासँग स’म्ब’न्धमा छन् भन्ने थाहा पाएँ। त्यो दिन सा’यद मेरो जीवनको सबैभन्दा ख’रा’ब दिन थियो। त्यो दिन रोएरै बित्यो। रोएर मात्र हुँदैन, एउटी पत्नीको धर्मले उनलाई स’म्झा’उनु पनि पर्छ भन्ने सोचेर उनलाई सम्झाएँ।
‘त्यसरी अरु केटीहरुसँग हिँडेर के हुन्छ ? मेरो हृदय दुखाएर, मलाई रु’वा’एर के पाउनुहुन्छ ?
बरु कुनै केटी मन परेको हो भने ऊ’सि’त हिँ’ड्नुको साटो बिहे गरेरै बस्नू सम्झा’उँदै गर्दा अच’म्म भयो। उनले सरी, अब म ऊसँगको स’म्ब’न्ध अ’न्त्य गर्छु भन्न थाले। मैले उनको कुरालाई विश्वास गरेँ। उनले देखाएको दृ’श्य र गरेका वा’चालाई आफैँले कल्पना गरेजस्तो ठानेँ। लाग्यो, त्यो दिनको कुरा सकियो। मेरो पति अब सही ठाउँमा आए।
कहिलेकाहीँ सम्झाउने मान्छेको अभा’वमा त्यस्तो हुन पनि सक्छ भन्ने लाग्यो तर समस्या मैले सोचे जस्तो गरेर सुल्झिएन। फेरि उनी केटीहरुसँग हिँड्ने र रात बिताउने गर्न थाले। जुन दिन नयाँ कुरा थाहा पाउँथेँ, फेरि सम्झाउँथेँ। उनी मौन रहेर मेरा कुरा सुनिरहन्थे।
‘त्यसरी अरु केटीहरुसँग हिँडेर के हुन्छ ? मेरो हृदय दुखा’एर, मलाई रुवाएर के पाउनुहुन्छ ? बरु कुनै केटी मन परेको हो भने ऊ’सि’त हिँड्नुको साटो बिहे गरेरै बस्नू, म आफ्नो बाटो लाग्छु।’
उनको मौ’न’तालाई मैले धेरै समयसम्म स’कारा त्मक रुपमा लिएकी थिएँ तर त्यो पनि होइन रहेछ। फेरि पनि नयाँ अ’फे’यरको कुरा सुनिन्थ्यो। यसपछि भने मलाई धेरै नै दिक्क लाग्यो। मैले अ”न्ति’म पल्ट सम्झा’उँदै भनेँ, ‘त्यसरी अरु केटीहरुसँग हिँडेर के हुन्छ ? मेरो हृ’दय दुखाएर, मलाई रु’वाए’र के पाउनुहुन्छ ? बरु कुनै केटी मन परेको हो भने ऊ’सि’त हिँ’ड्नुको साटो बिहे गरेरै बस्नू, म आफ्नो बाटो लाग्छु।’
डिप्रे*सनको बिरामी पो हो कि जस्तो पनि लाग्छ। मैले उनलाई डि*भोर्स दिएँ र एक्लै बसेँ भने पनि त्यसो गर्न स’क्ति’नँ। अरुसँग मैले बिहे गरेँ भने पनि म नयाँ बूढोलाई उसलाई जस्तो माया गर्न सक्तिनँ जस्तो लाग्छ
अरुसँग मैले बिहे गरेँ भने पनि म नयाँ बूढोलाई उसलाई जस्तो माया गर्न सक्तिनँ जस्तो लाग्छ। म के र कसो गरौँको अव’स्थामा छु।
यो सुनेपछि भने उनी भड्किए। उनले मलाई नानाभाँतिको आरोप लगाए। कतिसम्म भने मैले यहाँ जापानमा कुनै केटा भएकाले हेला गरेको आ*रोप लाग्यो। यस्तै कुराले दिनदिनै झ*गडा बढ्न थालेपछि भने टाढाको स’म्बन्धका कारणले पो यस्तो भएको हो कि भनेर एक वर्षअघि नेपाल फर्किएँ।
‘त्यसो गरिस् भने तँलाई काटेर म पनि म*र्छु, त्यसै छाड्दिनँ’
नेपाल फर्किएपछि भने म छ्या’ङ्ग भएँ। वास्तवमा मेरो अनुप’स्थि’तिमा बढेको दुरी मेट्न अरु नै तयार भएछन्। म एक महिनाभन्दा बढी बस्दा पनि उहाँको स्वभा’व परिवर्तन नभएपछि मलाई दिक्क लाग्यो।
यसपछि मैले उनलाई यस्तै चाला हो भने डि’भो*र्स गर्न बाध्य नपार्नु भन्दै रि’स देखाएँ। त्यसपछि त उनले जे भने, मलाई विश्वासै लागेन। उनले भने, ‘त्यसो गरिस् भने तँलाई काटेर म पनि म*र्छु, त्यसै छाड्दिनँ।’
घरिघरि मेरो बूढो डिप्रे*सनको बिरामी पो हो कि जस्तो पनि लाग्छ। मैले उनलाई डि*भोर्स दिएँ र एक्लै बसेँ भने पनि त्यसो गर्न सक्तिनँ। अरुसँग मैले बिहे गरेँ भने पनि म नयाँ बूढोलाई उसलाई जस्तो माया गर्न सक्तिनँ जस्तो लाग्छ। म के र कसो गरौँको अवस्थामा छु।
यस्तो अव’स्थामा के गर्नु ठीक हुन्छ होला ?
आज कोरोना बाट सङ्क्रम हुने यती धेरै हेर्नुहोस पुरा
विषालु च्याउ खाँदा यती धेरै बिरामी कस्तो हो त बिसालु च्याउ जानुहोस